शं’का लागेर झोला चेक गर्दा एस्तो भेटिएपछी प्रहरी समेत आश्चर्यचकित ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/शं’का लागेर झोला चेक गर्दा एस्तो भेटिएपछी प्रहरी समेत आश्चर्यचकित !
काठमाडौँ। हानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले २१ किलोग्राम च’रेससहित चार जनालाई प’क्राउ गरेको छ। वृत्तको टोलीले च’रेससहित मकवानपुरका २६ वर्षीय रामकुमार मोक्तान, २५ वर्षीय रमेशकुमार मोक्तान, २५ वर्षीय सुकराम गोले र २४ वर्षीय राजेन्द्र गोलेलाई बिहीबार साँझ प’क्राउ गरेको हो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होवीन्द्र बोगटीले श’ङ्कास्पद रुपमा झोलामा बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प’क्राउ गरेको जानकारी दिए। प’क्राउ परेकासँग आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ।
हानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले २१ किलोग्राम च’रेससहित चार जनालाई प’क्राउ गरेको छ। वृत्तको टोलीले च’रेससहित मकवानपुरका २६ वर्षीय रामकुमार मोक्तान, २५ वर्षीय रमेशकुमार मोक्तान, २५ वर्षीय सुकराम गोले र २४ वर्षीय राजेन्द्र गोलेलाई बिहीबार साँझ प’क्राउ गरेको हो।